Berbera: Ninkii u dhashay dalka china oo ka bogsaday Covid-19 | Berberanews.com
Home WARARKA Berbera: Ninkii u dhashay dalka china oo ka bogsaday Covid-19
Berbera: Ninkii u dhashay dalka china oo ka bogsaday Covid-19
Guddida ka hortagga caabuqa Koofidh-19, ee gobolka Saaxil oo shir jaraa’id oo ay qabteen ku sheegay in ay dhamaystireen goob loogu talo galay in la dhigo dadka looga shakiyo caabuqa Koofidh-19.
Xaruntan ayaa laga hir-geliyey cusbitaalka Degmaga Berbera waxana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isu duwaha wasaaradda horumarinta Caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr Bashiir Diiriye Jaamac, oo sheegay in xaruntaas loo dhamaystiray agabkii looga baahnaa, wuxuuna intaas ku daray inuu bogsadey ninkii dalka Shiinaha u dhashay ee hore looga helay xannuunka Korona fayras.
Waxa kale, oo halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah gudida iyo dhakhaatiirta oo sheegay in ay wadaan wecyi-gelin ah sidii xanuunkaasi looga gaashaaman lahaa, isla markaana ay bulshadu uga taxadari lahayd goobaha ay bulshadu ku kulanto.
Sidoo kale, xoghayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo duqa magaalada degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan (ciddin) oo halkaasi ka hadlay ayaa ka xogwaramay u diyaar-garowga iyo ka hortagga korona fayraska iyagoo bulshadana u soo jeediyey inay qaataan amarada ka soo baxaya guddiyada hawshan u xilsaaran.
Gabogabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Eng Axmed Cismaan Xasan, oo bulshada ku dhaqan Gobolka Saaxil, kula dardaarmay inay feejignaadaan ka fogaadaan inay ku soo ururaan goobaha ay bulshadu ku kulanto, waxayna guddidu soo kormeertay qeybaha kala duwan ee ay kooban tahay xaruntaasi loo diyaariyey dadka looga shakiyo xanuunkaasi.
Previous articleAfhayeenka madaxtooyadda Somaliland Oo ka warramay14 cisho oo uu karantiin isgeliyay
Next articleDr. Gabboose oo tallooyin caafimaad oo wax-ku-ool ah soo jeediyay